အရေးယူအတွက်ကေဘယ်လ်ကား Kirkpinar အတွက်နောက်ဆုံးညဥ့် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 SakaryaKırkpınarလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ကေဘယ်လ်ကားမှာမနေ့ကညဥ့်
06 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, အထွေထွေ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, TELPHER 0
Sapanca Hasanpaşaရပ်ကွက်နှင့် Mahmudiya တိုးတက်မှုအတွက်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို၏ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သည့်နိုင်ငံသားများတစ်ထိုင်-in ကိုbaşlattıkar ..
အဆိုပါ Mahmudiya ရပ်ကွက်အတွင်းတိုးချဲ့ရပ်ကွက်KırkpınarHasanpaşaအတွက်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုမှစတင်ကာထိုဒေသတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံသားများ၏စတင်လုပ်ဆောင်နှစ်ရက်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ထိုင်-in ကိုအရောင်ပုံရိပ်တွေသွားဆောက်လုပ်ရေးမတိုင်မီရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။
cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းတွင်ကိုထောက်ခံသူများကသူတို့အခြိနျမှနျမှလူစီမံကိန်းအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များသည်အခြားဧရိယာရန်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုရရှိထားသူသောကုမ္ပဏီ shift မှစတင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ၏အဖွဲ့ဝင်geliyorlar.önceနှငျ့ရငျဆိုငျနထေိုငျအစိမ်းရောင်ဧရိယာနိုင်ငံသားတွေကိုဖကျြဆီးမယ်လို့ထိုညဉ့်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းHasanpaşaရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်အတူလုံခြုံရေးပုဂ္ဂိုလ်များကုမ္ပဏီများမှနေထိုင်သူများကိုစောင့်ရှောက်ရန်စတင်ကပြောကြားသည် အခြိနျမှနျမှဆွေးနွေးရန် ..
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန် CHP Sakarya ပြည်နယ်ထိုင်ဖို့နိုင်ငံသားတွေထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်, ကိုက် "နှင့်ဆက်ဆက်မဟုတ် Sapanca တစ်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆန့်ကျင်ပေမယ့်တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. အကြီးအသံသယရှိသည်ပြဿနာနားထောင်ခဲ့တယ်။ ဒေသခံလူများကပေးထားသောအစိမ်းရောင်အာကာသအဖြစ်ကေဘယ်လ်ကားမြူနီစီပယ်ဧရိယာဒေသလုပ်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်နိုင်အောင်, "ဟုသူကဒါအများကြီးကပြောပါတယ်။
ကိုက် said: "ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေKırkpınarကေဘယ်လ်ကားကျင်းပမည့်ဤဒေသရှိအစိမ်းရောင်နေရာကနောက်ဆုံးကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့နည်းနည်းကြောင်းပြောကြသည်။ သူတို့ကဇုံဖွဲ့စည်းပုံမှာမှKırkpınar၏ယိုယွင်းစိုးရိမ်ပူပန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအစိမ်းရောင်နေရာစိုးရိမ်ပူပန်ငလျင်တစ်ဦးစုရုံးအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ နိုင်ငံသားများအသွားအလာရှိတယ်ဘယ်မှာဧရိယာရှောက်သွားဘို့ cable ကိုကားတစ်စီးလည်းအခြေအနေတုံ့ပြန်။ ငါကဒီမှာချင်အရာရှိတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားများကိုမှအယူခံဝင်နှင့်အင်တာဗျူးတောင်းဆိုချက်ကိုနားထောင်ရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအားဖြင့်မတ်တပ်ရပ်။ "
ထိုအတောအတွင်းသူတို့Hüseyin Can Igdir ( .. သီချင်းတွေရဲ့လူတွေပြောနေ၎င်း၏အရေးယူထွက်တင်ဆောင်လာသောမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုဆက်ပြီး - Medyab ဖြစ်ပါသည်)
နိုးနိုးကြားကြားKırkpınar Sapanca ကေဘယ်လ်ကား! 04 / 09 / 2019 ရွာကျက်စားရာအရပ်၏အရပ်ကွက်အတွင်းအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်သည့် ropeway စီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင် Sapanca Hasanpaşaနိုင်ငံသားများခုခံနေကြသည်။ 50 ၏ပြည်နယ် ropeway စီမံကိန်းကိုဒုက္ခရောက်နေbaşladı.yüklenicကုမ္ပဏီများသည်ရွာအားဖြင့်တည်ဆောက်-operate-တင်ဒါမတိုင်မှီအချိန်ဖမ်းဆီးရမိ piling စတင်ကာလအတွင်းခေတ္တအစီအမံအပေါ်ရဲထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေစဉ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုစောင့်ကြည့် Sapanca Kırkpınarရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ကျက်စားရာအရပ်အားဖြင့်များစွာသောပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးအစောင့် scuffled, နိုင်ငံသားတွေကို ယူ. ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများ၏ဤ action အတွက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နိုင်ငံသားများအစိမ်းရောင်ဒေသများသို့ရုန်းကန်နေကြသည်။ ဧရိယာနေထိုင်သူများသေးတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကွပ်မျက်မဟုတ်ခဲ့ '' သူတို့ကကွပ်မျက်ရပ်တန့်ဖို့တရားရုံးကကိုသွားကပြောပါတယ်။ Pop-up နှင့်ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု၏ကြာချိန်ရှိပါတယ်နေစဉ် ...
အဆိုပါအသနားခံစာအပေါ်xnumx.köprအရေးယူ '' Tomas '' 19 / 09 / 2014 မြောက်အမေရိကသစ်တောနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ကာကွယ်ရေးနှင့် '' ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော '' ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပင်၏အသီးများလုယက်ရန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောxnumx'üncတံတားဦးဆောင်နှင့် '' မှတ်တိုင် '' ၏မြောက် Marmara ကားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးနိုင်ငံသားများပတ်ဝန်းကျင်သောစကားကိုနားထောငျမခေါ်ပြီးတော့များ၏ရှေ့မှောက်၌ action ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအယူခံလွှာတင်ရေးဆိုလိုတာက: xnumx.köprအသနားခံစာအရေးယူဆောင်ထမေအတွက် ထိုသို့စီးတီးစီမံကိန်းညွှန်ကြားမှု Balmumcu'dak အဆောက်အဦးများ၏ရှေ့မှောက်၌စုဝေးစေတော်မူ၏။ Balmumcu မှာတည်ရှိပါတယ်သောအဆောက်အဦးများ၏ရှေ့မှောက်၌ထံတောင်းဆိုမှုအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းသစ်တောနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ကာကွယ်ရေး, "Stop xnumx.köprü, တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်လျှောက်ထား" ဟုအဆိုပါဝယ်လိုအားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူစတင်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဖုန်းခေါ်နှင့်အတူအများအပြားမြို့ပြ၏Şehicilikညွှန်ကြားမှုယနေ့အဆောက်အဦးများ၏ရှေ့မှောက်၌စုရုံးစတင်ခဲ့သည်။ မှအရေးယူ Balmumcu အသနားခံစာများအတွက်အတော်များများကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ခံသူတွေကို ...
အဆိုပါလွမ်းဆွတ်လမ်းရထားလိုင်းကိုအတွက်အစာငတ်ခံအရေးယူဝါယာကြိုးများပြတ်ခဲ့သည်! 02 / 11 / 2012 action ကိုဖန်ဆင်းသောလေ့လာရေးခရီးအတွက် Taksim ရင်ပြင်မှာ Taksim-Tunel လွမ်းဆွတ်လမ်းရထားလိုင်းကိုမှပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက်အစာငတ်ခံအပေါ် KESK, electricty, TTB နဲ့ Disk မနေ့က။ အဆိုပါ 200 ရှိလူများမကြာခဏ "ကျနော်တို့ကဖြေရှင်းချက်ချင် Die မနေပါနဲ့" "Long ကလူမျိုးညီအစ်ကိုများကိုအသကျရှငျ" join အကြောင်းဘုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြွေးကြော်သံများခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာလုပ်-ပင်လယ်အော်နှိပ်ဖို့အစာငတ်ခံ၏သေခြင်း၌လမ်းဆုံးဖို့အစိုးရပေါ်ခေါ်ပြီသူကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ။ အစ္စတန်ဘူလ်ဘဏ်ခွဲပလက်ဖောင်း Term Keks သူဖော်ပြချက် Sözcüs ကို Mustafa Turgut "Hunger အဆိုပါခေါ်ဆိုမှုအတွက်ဒီဝေဖန်ဇာတ်စင်မှာသပိတ်ပထမဦးဆုံးအစိုးရ, ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပိုပြီးငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသူကလူအသေခံများအတွက်ဝယ်လိုအား၏ပိတ်ဆို့မှုမှနား၏ကိုယ်အပါအဝင်လူတိုင်းများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ဝင်သော ...
တူရကီအရေးယူမက်ထရိုတင်းမာမှု (ဓာတ်ပုံပြခန်း) နမ်းလုပ် 26 / 05 / 2013 အတိတ်ကာလ၌ platform ပေါ်တွင်စောင့်ဆိုင်းနေနှင့်လူငယ်စုံတွဲတစ်တွဲကိုဖန်ဆင်းလက်တို့ကိုကိုင်ပြီး, တူရကီမြေအောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဘူတာထဲမှာတူရကီမြေအောက်ရထားတင်းမာမှု (ANKARAY) တွင်ကျင်းပခဲ့သောနမ်းအရေးယူ "ချစ်ခင်ရပါသောခရီးသည်, ကျင့်ဝတ်များ၏ကုဒ်နံပါတ်နှင့်အတူလိုက်နာပါ။ ကိုယ်ကျင့်တရားအလွတ်သဘောပြုမူမနေပါနဲ့" ဟုအဆိုပါကြေညာချက်ဆန္ဒပြချင်သူများသည်, အင်တာနက်လူမှုရေး မြေအောက်ရထားကတော့နမ်းအရေးယူဘို့မီဒီယာမှတဆင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတစ်ဦးက Facebook စာမျက်နှာကိုဖွင့ ်. 18.30 မှာယနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ Stop ၏တင်းပါးကြေညာချက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ က output ဗို့အားနှစ်ဆမှတုံ့ပြန်တဲ့သူအရေးယူနမ်းအစွန်းရောက်လက်ယာယိမ်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ။ အဓိကရုဏ်းသူဝင်သည့်အုပ်စုနှစ်စုအကြားတင်းမာမှုများငြိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ရဲအစီအမံတူရကီက Metro ယူ ...
TomAce အဆိုပါအသနားခံစာအရေးယူအတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်xnumx.köpr 19 / 09 / 2014 xnumx.köprအသနားခံစာအရေးယူ TomAce ခုနှစ်တွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်: မြောက်အမေရိကသစ်တောနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ကာကွယ်ရေးနှင့် '' ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော '' ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပင်၏အသီးများလုယက်ရန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောxnumx'üncတံတားဦးဆောင်နှင့် '' မှတ်တိုင် '' ၏မြောက် Marmara ကားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရှာတွေ့ပြီးနောက်ဖုန်းခေါ်အရေးယူအယူခံလွှာတင်ရေးဆိုလိုတာက နိုင်ငံသားများအဆောက်အဦး Balmumcu'dak များ၏ရှေ့မှောက်၌စုဝေးစေကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းညွှန်ကြားမှုနားကို။ Balmumcu မှာတည်ရှိပါတယ်သောအဆောက်အဦးများ၏ရှေ့မှောက်၌ထံတောင်းဆိုမှုအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းသစ်တောနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ကာကွယ်ရေး, "Stop xnumx.köprü, တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်လျှောက်ထား" ဟုအဆိုပါဝယ်လိုအားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူစတင်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဖုန်းခေါ်နှင့်အတူအများအပြားမြို့ပြ၏Şehicilikညွှန်ကြားမှုယနေ့အဆောက်အဦးများ၏ရှေ့မှောက်၌စုရုံးစတင်ခဲ့သည်။ အတော်များများကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ခံသူတွေကိုအရေးယူဘို့အယူခံလွှာတင်ရေး ...
အဆိုပါအသနားခံစာအပေါ်xnumx.köprအရေးယူ '' Tomas ''
အဆိုပါ 40 လှုပ်ရှားမှုအဆင့် Crossing ပြည်သူ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ပို Give မှ
ဗိသုကာပညာရှင်များ၏ Metro ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာအဘယ်သူမျှမအရေးယူမှု
3 ။ တံတားများအရေးယူလူသတ်သမားလမ်းတံတားအတွက်ရေးသားခဲ့သည်
Uludağda 8 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးမနေ့ကသေဆုံးခဲ့နှင်းလျှောစီးလျှောစောက်ပိတ်ထား